Ganacsade Wawasan Forex Tusiyaha - Forex Muujiyeyaasha Download
Home MT4 Muujiyeyaasha Ganacsade Wawasan Forex Tusiyaha
Ganacsade Wawasan Forex Tusiyaha
Ganacsade Wawasan Forex Tusiyaha waa istiraatiijiyad ganacsi Forex a. Ganacsade Wawasan u muuqataa mid ah saxan tilmaame SAR laakiin waa version ah kartoo. Nidaamka waa u fududahay in la fahmo iyo fududahay in ganacsi la. Ganacsade Wawasan waa istaraatijiyad arrimuhu soo socda si aysan u habboon tahay in la isticmaalo habka this si ay ganacsi ee suuqa a flat. Waxaa ka shaqeeya dhammaataan suuqa Daalacanayo a. System ka kooban yahay wax ka badan line a in ka muuqdo halkan hoose iyo wixii ka sareeya shaxda suuqa. Haddii line u muuqdo kor ku xusan shaxda ama ka hooseeya shaxda ma u muuqan karaan labada waqti isku mid ah. Taas macnaheedu waxa weeye iyadoo ay ku saleysan this nidaamka Ganacsade Wawasan, aad awoodo gaaban ama dheer waqti laakiin marna labada. Haddii aad sidaa sameeyaan in ka dhanka ah xeerka nidaamka ganacsi Forex Ganacsade Wawasan noqon doonaa.
Ha overthink oo kaliya waxa ay sii fudud oo Ganacsade Wawasan iyo aad lacag u sameeyaan si joogto doonaa. Waa in aad hubisaa in suuqa la Daalacanayo dhigi. Ka taxaddar iyo ilaaliyaan haddii ay jiraan ixtimaalka dib suurto gal agagaarka zone entry. Taas waxaa la samayn karaa adigoo dayi in jir ah waqti sare. Nidaamka waxa loo isticmaali karaa on kasta oo waqti iyo iyadoo labada nin lacag kasta oo. Isticmaal marsiin ah si caqli ah oo ay leeyihiin istiraatiijiyooyinka maaraynta lacagta gacanta. Calan halista aad inuu ku Abaal mariyo saamiga si ay ugu yaraan 1:2. Samee qorshe ganacsi oo aad iyo dhegi waxay si. Haddii aad raacdo xeerarka oo dhan edbin aad lacag ka dhigi doonaa.
Marka nidaamka ganacsi Forex si sax ah ku raran on boosteejo ganacsi aad shaxda waa sidan u eg:
Waxaad ka arki kartaa sawirka kor ku xusan in Ganacsade Wawasan guuro kor iyo hoos shaxda qiimaha. Marka suuqa waa ganacsade fiican Wawasan waa hoos shaxda qiimaha iyo waa cad ee midabka iyo markii suuqa waa hoos Wawasan Ganacsade yahay ee kor ku shaxda qiimaha iyo waa orange in midabka.
Asal ahaan waa ammaan ah si ay u iibsadaan marka Ganacsade cad Wawasan muuqataa hoos shaxda. Waxaad qaban karto ganacsiga sida midabka orange dheer Ganacsade Wawasan ma muuqato in kor ku xusan shaxda qiimaha. Xaaladaha ayaa ah kuwo la mid ah la iibinta.
Xaaladaha Iibsiga Isticmaalka System.
arrimuhu Major waa in ay kor u. In la is tusay kartaa iyagoo eegaya shaxda.
White midab Ganacsade Wawasan waa muuqdaan hoos shaxda qiimaha.
Shumac waa in ay fiican.
Dhig stop khasaaraha ka hooseeya hooseeyo lulid dhawaan.
Qaado faa'iido marka midabka orange ah ganacsade Wawasan muuqataa kor ku xusan shaxda.
Xaaladaha Iibinta Isticmaalka System.
arrimuhu Major waa in ay hoos u. In la is tusay kartaa iyagoo eegaya shaxda.
Orange midab Ganacsade Wawasan waa muuqdaan kor ku xusan shaxda qiimaha.
Shumac waa in ay ahaataa bearish.
Dhig stop khasaaro kaliya kor ku xusan lulid dhawaan sare.
Qaado faa'iido marka cad midab Ganacsade Wawasan muuqataa hoos shaxda.
Ganacsade Wawasan Forex Tusiyaha waa Metatrader a 4 (MT4) tilmaame iyo nuxurka tilmaame Forex ee waa in aan baddalno xogta taariikhda wxbarashada.
Ganacsade Wawasan Forex Tusiyaha siinayaa fursad ay ku ogaan dhegyadii kala duwan iyo astaamaha isbedbeddelka sicirka kuwaas oo aan la arki karin in ay isha qaawan.
Sidee si loo soo dajiyo Ganacsade Wawasan Forex Indicator.mq4?
Download Ganacsade Wawasan Forex Indicator.mq4
Copy Ganacsade Wawasan Forex Indicator.mq4 in Directory Metatrader aad / khubaro / tilmaamayaasha /
Right click on Ganacsade Wawasan Forex Indicator.mq4
Tusiyaha Ganacsade Wawasan Forex Indicator.mq4 waxaa laga heli karaa aad Chart
Sidee Xagga Metatrader saar Ganacsade Wawasan Forex Indicator.mq4 4 Chart?
article PreviousWaxaan Sadukey V1 Forex Tusiyaha
Next articleOrod Madyan Forex Tusiyaha